Bit By Bit - Mifehy - 6.8 Famaranana
Ny fikarohana ara-tsosialy amin'ny vanim-potoana nomerika dia miteraka olana vaovao etika. Saingy tsy azo resena ireo olana ireo. Raha toa isika, amin'ny maha-fiaraha-monina antsika, dia afaka mampivoatra ireo fitsipika sy fitsipika napetraky ny mpikaroka sy ny olom-pirenena, dia azontsika ampiasaina ny fahaizan'ny taona nomerika amin'ny fomba izay tompon'andraikitra sy mahasoa ny fiarahamonina. Ity toko ity dia maneho ny ezahiko hanosika anay hizotra amin'io lalana io, ary heveriko fa ny fanalahidy dia ho an'ny mpikaroka hanaraka ny eritreritra ara-pitsipi-pitenenana, ary hanohy hanaraka fitsipika mifanaraka amin'izany.
Ao amin'ny fizarana 6.2, dia namaritra tetikasa fikarohana siantifika nomerika telo aho izay nahatonga adihevitra ara-tsosialy. Avy eo, ao amin'ny fizarana 6.3 dia nofaritako izay heveriko fa ny antony fototra amin'ny fisalasalàna ara-tsosialy amin'ny fikarohana ara-tsosialy dizitaly: ny fampiakarana haingana ny mpikaroka mba handinihana sy hanandramana ny olona tsy misy fanekena na fanentanana akory. Ireo fiasa ireo dia miova haingana kokoa noho ny fitsipika sy lalàna ary lalàna. Avy eo, ao amin'ny fizarana 6.4, dia nanoritra fitsipika efatra efa misy aho izay afaka mitari-dalana ny fisainanao: Hajao ny olona, ​​ny fahamendrehana, ny rariny, ary ny fanajana ny lalàna sy ny tombontsoan'ny besinimaro. Avy eo, ao amin'ny fizarana faha-6.5, dia namintina sehatra roa momba ny fitsipika ara-ethika-manaraka sy ny deontology aho-izay afaka manampy anao amin'ny iray amin'ireo fanamby lalina indrindra izay mety hiatrika anao: rahoviana ianao no mety handraisanao hevitra ara-pihetseham-po mba hahazoana tanjona tapitra. Ireo fitsipika sy rafitra etika ireo dia ahafahanao mandroso tsy mifantoka amin'ny zavatra azon'ireo fitsipika efa misy ary mampitombo ny fahaizanao mifampiresaka amin'ny hevitra sy ny mpikaroka hafa.
Tamin'io fiaviana io, tao amin'ny fizarana 6.6, dia niresaka momba ny faritra efatra izay tena sarotra ho an'ny mpikaroka ara-tsosialy dizitaly aho: ny fanekena voamarina (fizarana 6.6.1), ny fahatakarana sy ny fitantanana ny loza ara-pahalalana (fizarana 6.6.2), ny fiainana manokana (fizarana 6.6.3 ), ary manao fanapahan-kevitra ara-batana raha misy tsy fahatokisana (fizarana 6.6.4). Farany, ao amin'ny fizarana 6.7, namintina tolo-kevitra telo aho mba hiasa amin'ny sehatra misy etika tsy misy saina.
Eo amin'ny sehatra, ity toko ity dia nifantoka tamin'ny fomba fijery ny olona iray mitady generalizable mpikaroka fahalalana. Araka izany, dia mamela fanontaniana manan-danja avy momba ny fanatsarana ny rafitra ny etika niandraikitra ny fikarohana; fanontaniana momba ny fitsipi-pandaminana ny fanangonana sy ny fampiasana ny angon-drakitra amin'ny orinasa; sy ny fanontaniana momba ny fanaraha-maso faobe ny fitondram-panjakana. Ireo fanontaniana hafa dia mazava ho azy fa sarotra sy sarotra, nefa ny fanantenako fa ny sasany amin'ireo hevitra avy amin'ny fikarohana ny fitsipi-pitondrantena dia manampy ireo toe-javatra hafa.